Mampihena lanja ao anatin'ny iray andro 1 KG, hainao ve ny fomba? Lazainay aminao ny fomba hahazoana azy | Nutri Diet
Very very iray kilao ao anatin'ny iray andro amin'ny sakafonay
Sakafo natao ho an'izay mila izany mampihena lanja ao anatin'ny iray kilao ary esory ny kibonao. Raha apetrakao amin'ny fampiharana io fomba io hentitra Hamela anao hahavery 1 kilao ao anatin'ny 1 andro. Mazava ho azy, raha afaka mampihatra azy io dia tsy maintsy manana toe-pahasalamana manara-penitra ianao ary tsy karazan-tsakafo izay azonao tazonina elaela kokoa; Natao ho an'ireo fotoana manokana izay ilantsika mampihena ny lanjantsika haingana sy mihodina (ho an'ny fampakaram-bady, fety, filaharambe sns).
Raha tapa-kevitra ny hampihatra an'ity sakafo ity ianao dia tsy maintsy manao izany misotroa rano betsaka araka izay azo atao Mandritra izany andro izany, satria matetika ny olona tompon'andraikitra amin'ny fivontosana dia ny tsy fisian'ny rano izay mitazona tsiranoka amin'ny vatantsika. Ampirisihina ihany koa ny sakafo mba tsy hanana sira kely (noho io antony io ihany) satria ny sira be loatra dia mampitsahatra antsika ary mahatonga ny vatana hirona hitazona tsiranoka. Ho fanampin'ny rano dia azonao atao koa ny mampiasa infusions miaraka amin'ny sweetener.
Hevitra tsara iray hafa hampihenana lanja ao anatin'ny iray andro ny sakafo vanim-potoana misy ranom-boasarimakirana na vinaingitra hialana amin'ny filana sira be. Ary mazava ho azy, a sakafo tsy misy lafarinina manampy anao foana hampihena ny lanjanao haingana kokoa.
Mazava ho azy, tena zava-dehibe ny mahatadidy fa io sakafo io dia atolotra mandritra ny iray andro fotsiny.
1 Sakafo hampihena ny lanjany ao anatin'ny iray andro
2 Ahoana no ahafahako mamoy lanja haingana?
3 Sakafo hafa ao anatin'ny iray andro
4 Menu ho an'ny iray andro monodiet
5 Afaka mamoy kilao ve ianao ao anatin'ny iray andro?
6 Ohatrinona ny be indrindra azonao atao mampihena ny lanjanao ao anatin'ny iray andro?
7 Zava-dehibe tokony ho ao an-tsaina
Sakafo hampihena ny lanjany ao anatin'ny iray andro
Mifoha maraina fotsiny ary amin'ny vavony foana: rano mafana iray vera sy ranom-boasarimakirana voajanahary iray vera.
Fampidirinaana ny safidinao amin'ny zava-mamy sy plum.
Ronono an-tsiranoka iray vera sy vovo-molotra 1. Azonao atao koa ny manova azy amin'ny voankazo iray izay tsy voaloboka na akondro.
un vilia lasopy legioma (zavatra maivana toa ny holatra, voatabia, asparagus, sns) ary voankazo iray hisafidianana ny grapefruit na ny voasary.
Ampahany amin'ny gelatin maivana.
Voatabia maivana, asparagus, poaka na ron-draha mitovy aminy, lovia salady maitso maitso tianao sy voasary mandarin.
Alohan'ny hatoriana: fampidiranao safidinao.
Ahoana no ahafahako mamoy lanja haingana?
Ao amin'ny fiaraha-monina misy antsika dia tadiavintsika faingana ny zava-drehetra, na mahazo zavatra ara-materialy, mahatratra ny ilan'ny tanàna amin'ny lanja iray na very lanja.
Mifantoka amin'ilay farany izahay, te-hihena haingana ny rehetra, na izany aza, ny fihenan'ny lanja dia heverina ho iray amin'ireo asa sarotra indrindra azo tanterahana.
Misy teknika maro hahatratrarana fihenam-bidy lehibe nefa tsy manimba ny fahasalamantsika, na ny fiakaran'ny vokatr'izany. Mba hahatratrarana izany dia mamela anao hanana toerana tena ilaina izahay hanaraka anao mba hahazoanao ny valiny tsara indrindra.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ilaina ny misotro rano be. Halaviro ny ranom-boankazo, soda, zava-pisotro misy alikaola na zava-pisotro misy alikaola. Ireo rehetra ireo dia misy siramamy, sodium, ary gliosida marobe ary mety hahatonga antsika hitana ranoka.
Zatra mampihena ny habetsaky ny sakafo. Tokony hofehezintsika ny kaloria lanintsika, tsy maintsy mianatra mifehy ny habetsahan'ny sakafo hohanintsika isaky ny misakafo isika. Mihinana intelo isan'andro isan'andro, fara fahakeliny, amin'ny habetsany ary misotro rano bebe kokoa.
Manaova fampihetseham-batana isan'andro. Miaraka amin'ny fampihetseham-batana dia midika hoe mandeha, milomano, mihazakazaka, bisikileta na manao tabilao fanatanjahan-tena ao an-trano. Ny tsara indrindra dia ny fandraisana azy io ho zava-dehibe ary manao fanatanjahan-tena isan'andro mba hahafahanao mihena mora foana.
Sorohy ny gliosida ary ampitomboy ny fibre. Zava-dehibe tokoa ny tsy firaharahana gliosida mandritra ny vanim-potoana iray satria lasa siramamy sy tavy izy ireo rehefa mandeha ny fotoana, mba hanomezana fahafaham-po ny vatantsika, dia tsy maintsy mihinana sakafo manankarena fibra isika. Izy ireo dia manala poizina ary mitazona fomba fitsaboana mahasalama mahasalama.
Izahay dia manome anao ny lisitry ny sakafo sasany izay tsy tokony hialantsika raha tsy te-hahazo lanja mora foana izahay.
Comida rápida: hamburger, pizza, alika mafana sns.
Ny zavatra tena ilaina amin'ny resaka fahaverezan'ny lanja dia ny fanaovana azy io hieritreritra ny fahasalamantsika, tsy tokony hanao risika na hampidi-doza ny vatantsika amin'ny sakafo fahagagana na sakafo henjana isika.
Sakafo hafa ao anatin'ny iray andro
Ny sakafo izay heverina fa vitaina ao anatin'ny iray andro dia fepetra vonjy maika izay manampy amin'ny fanapoizinana ny vatana ary miasa ho "therapeutement shock" hanomboka hanary lanja. Ireto ny toetra asongadinay:
fifadian-kanina: sakafo haingana izay maharitra 24 ora fotsiny.
faneriterena: Ny fetra amin'ny sakafo dia tsy tokony hihoatra ny iray andro.
fanadiovana: manampy ny fivezivezena sy fanesorana ny tsinainy, mitazona ny diany ho madio.
Deflame: hahazo kibo fisaka ianao satria tsy hijaly amin'ny fivalanana sy hiady amin'ny fikorontanan'ny kibonao.
Fanadalana: hisoroka ny fitazonana ranon-javatra sy poizina mitazona ianao.
Menu ho an'ny iray andro monodiet
Desayuno: Dite roa kaopy misy voasarimakirana voatoto sy tantely iray sotro. Miaraka amin'ny ranom-boasary manaraka.
Midmorning: yaourt skimmed.
sakafo atoandro: Lasopy legioma matavy ambany, salady kely amin'ny salady, arugula, basilà ary asparagus fotsy. Yaorta ambany tavy.
fitsangatsanganana: Voasary voankazo miaraka amina voankazo iray manontolo.
sakafo hariva: Sakafo lasopy legioma sy legioma mahandro miaraka amin'ny zava-manitra, tsy misy akanjo matavy.
Afaka manary iray kilao ve ianao ao anatin'ny iray androa?
Raha te hihena isika, iray kilao raisina foana hoe fepetra farafahakeliny tiantsika ho veryMety hipoitra fa dingana kely ny zava-bita, na izany aza, manomboka hatrany amin'ny kilao voalohany ny fihenan-danja.
Ny famoizana lanja dia resaka matematika, kilao kilao dia manakaiky ny tanjonay izahay, hahatratra ny lanjany tsara. Na izany aza, milalao fika ny fanahiana ary te-hihena avy hatrany izahay.
Sakafo iray andro haingana dia raisina ho toy ny regimen detox 24 ora izay mety hahatonga antsika hahavery iray kilao ao anatin'ny iray andro. Na izany aza, ireo sakafo ireo dia azo atao mandritra ny iray andro fotsiny satria mety hanimba ny fahasalamantsika izy ireo.
Ohatrinona ny be indrindra azonao atao mampihena ny lanjanao ao anatin'ny iray andro?
Ao anatin'ny iray volana dia afaka mamoy eo anelanelan'ny 3 sy 4 kilao amin'ny fomba mahasalama isika raha manaraka sakafo tena henjana. Ny fahaverezan'ny tavy iray kilao dia mitovy amin'ny famoahana kaloria 3.500 XNUMX eo ho eo. Raha te ho very kilao isan-kerinandro ianao dia tokony handany kaloria fanampiny 1000 isan'andro amin'ny herinandro. Ity fatiantoka kaloria ity dia azo atao amin'ny alàlan'ny sakafo tena henjana na tsy maintsy may amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena.
Mba hahatratrarana ny tanjon'ny esory ny kaloria 1000 isan'andro Ireo mpitsabo misakafo dia manolo-kevitra ny famoronana diary sakafo hitazonana fifehezana tonga lafatra, na amin'ny kahie na amin'ny alàlan'ny fampiharana finday.
Ireto misy toro lalana azonao arahana mba hahatratrarana ny tanjonao:
Tsy maintsy manao fanatanjahan-tena 5 ka hatramin'ny 6 andro isan-kerinandro.
Ny isan'ireo kaloria entinao dia ny taonanao, ny lahy sy ny vavy ary ny lanjanao no mamaritra azy.
Izahay dia mamela anao ohatra iray amin'ireo loko izay anaovan'ny olona 68 kilao.
Run mandritra ny 20 minitra amin'ny 9,5 km / ora: kaloria 229
bisikileta elliptika 30 minitra: kaloria 179
Nadar tratra 30 minitra: kaloria 189
Kickboxing mandritra ny 30 minitra: kaloria 357
Mila manana tanjona mazava isika, raha te hihena ianao dia tsy maintsy mandany mihoatra ny laninao, izany hoe mihinana kely ary mihetsika bebe kokoa. Sakafo izay mampanantena ho very 10 kilao ao anatin'ny iray volanaNa izany aza, lalaoviny ny fahasalamanao ara-batana sy anaty ary ara-tsaina. Ity karazan-tsakafo ity dia mahatonga ny sakafo tsy ampy sy manao fanatanjahan-tena be loatra ary amin'ny fotoana maharitra dia mety hitondra olana lehibe.
Zava-dehibe tokony ho ao an-tsaina
Ilaina ny fisotroana rano mba hahafoana lanja ao anatin'ny iray andro
Tsy tokony hohadinointsika ireo teboka manan-danja indrindra amin'ny sakafo mamela anao hihena mandritra ny iray andro hiasa:
Ilaina ny rano fisotro, farafaharatsiny mila misotro litatra roa ianao mba hiasa tsara.
Tsy tokony hosoratanao ny voankazo, satria ny ankamaroan'ny fibra dia mipetraka ao amin'ny hoditra ary hanampy anao hanafaka ny tsinay.
Raha noana mandritra ny tontolo andro ianao afaka mihinana seleria na karaoty ianao Tsisy olana.
Raha reraky ny rano fisotro ianao dia anoroana an'izany misotroa dite maitso izay tena diuretic, manampy amin'ny ady amin'ny hanoanana ary manampy amin'ny fanafoanana ny tavy. Ny dite mena dia soso-kevitra ihany koa.
Tsy mila manao fanatanjahan-tena ianaoNa dia manao izany aza ianao dia hiasa tsara kokoa ny sakafo.
Raha nahasoa anao io sakafo io dia nanoro hevitra anao izahay mba hiditra amin'ny pejinay Facebook fipihana eo amin'ny bokotra manaraka. Tsindrio iray fotsiny io ka tsy ho diso ny torohevitray momba ny fahasalamana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Very 1 kilao ao anatin'ny 1 andro
155 hevitra, avelao ny anao
DORA ARDILA SCHOLARSHIP dia hoy izy:
TE HANONDRANO KILOS 10 LEHIBE INDRINDRA IZAO …… MILAZA FA IZAO IHANY NO HANAO INDRINDRA INDRINDRA ANDRIAMANITRA …… REHETRA MBOLA HATRANY MBOLA HANOHANA NY Sakafo
Valiny tamin'i DORA ARDILA BECARIA
Lara dia hoy izy:
Salama ny anarako dia LARA ARY 11 taona monja aho dia ny farany izay nandanja ahy 42 KILOS IZAHO IZAO TSY MAINTSY milanja 56 azafady manampy ahy azafady
meiiswag dia hoy izy:
Mihinana voankazo betsaka, manaova fanatanjahan-tena, farafahakeliny 30 min. Isan'andro, ao amin'ny YouTube dia mampiseho horonantsary maro momba ny fomba hampihenana lanja, miaraka amin'ny fampihetseham-batana, Pilates, sns. Misotroa rano be 🙂 & mila manana finiavana be ianao, mbola kely! 14 taona aho, ary nanomboka nisakafo satria tsy dia tsara ny tenako! ary miasa ho ahy io! Mirary anao ho tsara vintana! (:
Mamaly an'i MeliiSwag
Sempotra be ao amin'ny kiboko aho ary te hampidina azy ao anatin'ny 7 andro
Mamaly an'i katherin
Manana fanoloran-tena aho amin'ny asabotsy alina… azoko atao ve io sabotsy io ihany amin'ny vavony foana?
CAMI dia hoy izy:
maninona indray andro any dia tsy maintsy ataonao fotsiny?
Mamaly an'i Cami
Milanja 53 aho ary tiako ny hampihena ny lanjako 5 kely tsy dia salama aho
ny gorada dia hoy izy:
ny fomba ataoko mba hampihenana lanja ahy dia mandeha any amin'ny gym aho ary manary 4 fa mahatsapa toy izany koa aho te-hihena mandritra ny 2 andro toy ny lasa
Valio ny gorada
Milanja 51 aho ary te hidina hatramin'ny 46, inona no azoko atao, afaka mandefa sakafo ho ahy ve ianao?
lissette dia hoy izy:
Ankizivavy aho ary te hidina betsaka tsy tiako ny mahita ny akanjoko somary malalaka aho ary tsy te hahita ny fitaovako ary te-hahafantatra ny fomba hijanonako sakafo koa raha noana aho
Mamaly an'i lissette
SAWIWA dia hoy izy:
Salama, 22 taona aho ary niteraka 10 volana lasa izay, ary toa matavy be aho, milanja 84 kg, faran'izay kivy aho, be fatratra ny sakafo atoandro tontolo andro, tsy haiko ny antony, talohan'ny tsy tiako ny mihinana fotsiny ary izao tsy afaka mijanona aho. Tohano aho NOOO HITA HANAO !!!
Valiny ho an'i SAWIWA
Fitsipi-pitondran- dia hoy izy:
ilaina ny miaritra ny hanoanana hahavery lanja
Mamaly ny sakafo
Ankizivavy 14 taona aho ary tiako ny manify ny valahako, hitako matavy be izy ireo, mety ho ahy ve ity sakafo ity?
oh ary azonao omena fanatanjahan-tena ve aho
16 taona aho ary manao dihy, tsy dia saro-kenatra aho, fa raha te-hanana kibo fisaka aho dia hanao izay tiako ity sakafo ity.
mOrenitHaaaa dia hoy izy:
helloaaa..nasoa tolakandro ho an'ny rehetra, jereo ity sakafo ity ... tsy hoe tsy haiko ... fa tsy dia mahasalama dia tsara kokoa ny miaraka amin'ny sakafo hafa noho ny ... angamba very kilao mitovy ianao fa rehefa mandeha ny fotoana, fa taty aoriana dia sarotra kokoa ny maka ny kilao very tamintsika…. ii dia hanao an'ity ezaka ity ianao amin'ny TSY MISY ... satria any aoriana dia ho sitrakao indray izy ireo fantatrao .... Napetrako ity resaka ity na noo paraa .. noo agaiis estaa diietaa satria samy afaka manao izay tiany ny tsirairay ..
Tsia, mahasalama tokoa izany, satria raha lazaiko aminao ...
Lazaiko fotsiny aminao fa misakafo tsara kokoa .. fa tsy mila mahafoy zavatra betsaka ... ii tsy mosarena .. resaka mitady ... ii ai endolino tena weniisiimos .. ii mora .. ohatra .. nooo I al Izay vidiko dia mitentina € 12 isan-kerinandro .. II dia manoro hevitra ahy izay tokony hohaniko sy izay tokony ho aho mba hahavery kilao bebe kokoa… & salama tsara aho… wenoo manantena aho fa handray ny hevitro ho fisaorana betsaka
Mamaly an'i mOrenitHaaaa
Celina dia hoy izy:
Salama, 1'73cm ny halavako ary milanja 70 kg aho. Herintaona lasa izay, nifindra tany an-tany hafa aho, ny fiovana dia nahatonga fiovana maro teo amin'ny fiainako sy ny fahazarana talohan'ny nilanja 15 kg ambany. Mila sakafo aho mba hidina haingana ... fa torohevitra ihany koa ny tsy hiverenako satria mijaly amin'ny tebiteby aho ary raha tsy mifehy tena aho dia afaka mihinana mofo antsasaky ny bimbo amin'ny tolakandro.
Mamaly an'i celina
Azafady olona manaja ahy, mila fantatro fa voavonjy izy….
patris dia hoy izy:
Nanomboka tamin'ny 95kilos aho ary milanja 72kilos ary manantena aho fa hahatratra 65kilos.
Nanandrana sakafo sakafo an'arivony sy an-tapitrisany aho ary tena miasa izy ireo raha mifikitra amin'izany ianao, saingy tsy mahasalama izany amin'ny fomba fiainana.
Izaho dia eo am-pelatanan'ny manam-pahaizana manokana, mpihinana sakafo ara-tsakafo ary nampianatra ahy hihinana izy, mihinana ny zava-drehetra ary tsy mihombo ny lanjako amin'ny fomba hafa very lanja ary tsy misy lanja sy zavatra hafahafa.
Tsy mihinana fanafody aho, na mihozongozona na miomana, fa manaraka sakafo mety fotsiny ho ahy.
Mihobia, mitadiava mpahay sakafo maha-mpahay sakafo, tsy misy NATURHOUSE na bontolo toy izany, avelao ny paty ary avy eo…. Averina indray ny tavy.
Mandany € 7 isaky ny mandeha aho hijerena.
Ireo sakaizako dia nihaino ahy ary very tamin'ny tahan'ny 1k isan-kerinandro, izany hoe 4 ka hatramin'ny 5 kilao isam-bolana.
OLONA MANAMPY NY OLON'IZAY Miverina…. Iray ihany ny zavatra tsy maintsy atao ... TANDREMO IZAO ... hihinana sakafo ianao.
Mamaly an'i patris
Miarahaba anao !! Io no fomba mety, aza midina miaraka amin'ny sakafo, izany
fihetsika sy fifehezana
Tsy afaka mihinana aho izay mahatonga ahy ho noana tsy mila sakafo hafa tsy hanoanana intsony ary mihena ny lanjako ………… .. FANAMPIANA ………… .. tena ilaiko izany ………… .. !!!!!
Anio no hanombohako azy, hilazako anao afaka telo andro! oroka
Tavy mavokely dia hoy izy:
Sabotsy misy fety bn shilo ary mila manao bikini ianao,
nmas matavy aho ary te hihena mandritra ny 3 andro toy ny 4 kilao
Tsy afaka manaraka ny sakafo in-3?
Valio amin'i PinkyGorda
Mila very kilao roa aho rahampitso no hihinana an'io sakafo io ???
Jereo, manana fotoana aho amin'ny talata, ary zoma izao, inona no ho very 5 kilao eo amiko?
xdc dia hoy izy:
Afaka mampihena ny lanjanao ianao amin'ny fandehanana an-tongotra adiny iray, fihinana voankazo mandritra ny andro fotsiny, tiako ho fantatra hoe ohatrinona ny lanja very anao.
Valiny amin'ny xdcv
Prisila dia hoy izy:
Tena tsara ny sakafo, antenaiko fa manampy ahy io satria ny ampitso dia manao fety aho ary misy pisinina
Mamaly an'i priscila
daiana florencia martinez uñates dia hoy izy:
Te handany lanja aho satria saro-kenatra tsy matavy toy ny ataoko ao anatin'ny iray andro azafady mba valio aho toy izao fa 12 taona aho ary handeha amin'ny kunfu tenisy sy joqueyal miaraka amin'izay fa fotoana hafa azafady tiako ho very lanja
Mamaly an'i daiana florencia martinez uñates
ny fomba tsara indrindra hampihenana ny lanja dia ny: mampiasa vovon-tsakafo isan'andro dia handeha ... tena tsara ho an'ny fahasalamanao ihany koa ...
arahaba soa ..
Ankizivavy 11 taona aho ary ny namako rehetra dia tsy namako avy amin'ny kilasiko hoy izy ireo hoe matavy aho ary mino an'io fa mieritreritra aho fa tsara kokoa ny matavy sy tsara tarehy k tsy mahia sy maharikoriko ary izaho mieritreritra ihany koa fa tsara kokoa ny manana k tsy iriko, fa na izany aza efa nanao sakafo aho ary tsy namoy na inona na inona nefa na izany aza dia mandeha any amin'ny mpanety volo nenitoako aho, manana ny zava-drehetra izy ary mihena be aho xk manana herinaratra koa izy lamba firakotra mba hihena ary milanja 34kg aho izao ary alohan'ny 45kg bno besssssitos ary avelako ianao k miteny muxo aho.
MARIA LORENA LOZANO HO AVY dia hoy izy:
TENA KILALA kely aho fa milanja 6 KILOS bebe kokoa ary lanja 56 KILOS ary 14 taona aho
TE HIRESAKA Herinandro ao anatin'ny herinandro aho mba ho tsara handeha any amin'ny ranomasina
TE HIRAY INDRINDRA IZAO FA TSY TE HITSY TOA IZAY FAT IZANY
Valio amin'i MARIA LORENA LOZANO A CUEVAS
elposoposho dia hoy izy:
MIASA AMIN'NY FAHORIANA MAMPIASAINA .. azafady mila fanampiana aho ary tsy afaka manoratra momba ny fatin'ny rantsan-tànako .. Malahelo aho! Ampio aho plizz na mihinana azy rehetra aho ..
Valiny tamin'i Elposhoposho
DINHA ELIZABETH dia hoy izy:
Mavesatra loatra aho, nanoro hevitra ahy izy ireo hisotro rano betsaka, andramana mandritra ny herinandro fa tsy mandeha izany. Mihevitra aho fa mila fanamarihana ara-tsakafo hafa saingy manome torohevitra aho fa ny sakafo rehetra hohanintsika dia tokony hitsako azy tsara ary antenaiko fa izy ireo omeo rivotra aho.
Valio amin'i DINHA ELIZABETH
Salama, 14 taona aho ary tena fohy, saingy na eo aza izany dia milanja 60 kilao aho ary malalaka be ny valahako sy ny feny. Tsy mahazo aina aho satria manify be ny rahavaviko sy ny namako ary tiako ny handefasan'izy ireo sakafo iray miaraka amina fanazaran-tena very 50 kilao farafaharatsiny.
solmary dia hoy izy:
Te handany lanja ao anatin'ny iray andro aho fa tiako ny hijanona ambany be ny kiboko ary tsy ny sakafo mety no nomen-dry zareo ahy satria latsaky ny 18 kilao tao anatin'ny iray andro dia mety hisy izany rehetra izany fa tiako hiasa izy ireo ary izy ireo apetaho manokana ny sakafo izay lazain'izy ireo fa mety izay tokony hohaniny ary izay tsy tokony hohanina
Mamaly an'i solmary
Salama, Jacqueline no anarako, izaho dia 1.69 ary milanja 160 aho ary mahatsiaro ho nolavin'izao tontolo izao. Tsy fantatro izay sakafo tokony hatao. dia hoy izy:
Salama, Jacqueline aho, 1.69 x 160 aho ary mahatsapa fa nolavin'izao tontolo izao, tsy fantatro izay sakafo tokony hatao, fa tonga lafatra ny fahasalamako, misaotra an'Andriamanitra, mila fanampiana kely fotsiny aho
Valin-kafatra ho an'i Hello, ny anarako dia Jacqueline, izaho dia 1.69 ary milanja 160 aho ary mahatsapa ho nolavin'izao tontolo izao, tsy fantatro izay sakafo tokony hatao, mangetaheta aho, mba ampio aho
flintstone dia hoy izy:
Salama jacqueline! Jereo fa 1, 64 aho ary milanja 81kg. Nanomboka nanao sakafo aho izay nanindroman'izy ireo ahy mineraly ary very 4kg aho tao anatin'ny iray volana! Tsy dia mora loatra izany fa rehefa manomboka ianao dia zatra mihinana zavatra mahasalama in-6 isan'andro ... Manoro hevitra aho!
Valio ireo flintstone
Ny chiarux dia hoy izy:
Somary saro-kenatra aho fa tsy hitako izay mila lanjako kely kokoa ka aleo jerena izay misy, andro vitsivitsy izao dia holazaiko aminao 🙂
Mamaly an'i La chiarux
coni dia hoy izy:
Salama manana fangatahana roa aho! ny voalohany… inona no dikan'ny fampidirana?, ary ny faharoa… .. impiry ianao no afaka manao sakafo?, satria milaza fa iray andro monja
Mamaly an'i coni
veroooo dia hoy izy:
Ny fampidirana dia ronono, dite, kafe, na zavatra toy izany,
Mamaly an'i veroooo
zazavavy kely dia hoy izy:
Mila milanja 10 kilao farafahakeliny aho isam-bolana. Azafady, raha misy olona te hanampy ahy hilaza amiko, milanja 80 kilao aho ary 1.68 ary 14 taona aho, raha misy te hamela ahy hanao hevitra. zavatra, misaotra betsaka 🙂
Valiny amin'ny zazavavy kely
Salama, mila midina 1k sy sasany aho, raha mihinana voasary iray andro sy bisikileta 2 ora fotsiny aho, afaka hidina ve?
vehivavy saka356 dia hoy izy:
Amin'izay zavatra tokana azonao dia ny mamparary anao, mp sakafo ara-sakafo aho, miara-miasa amin'ireo mpifaninana amin'ny fahasalamana dw ary milaza aminao fotsiny aho fa mety ho very amin'ny fomba mahasalama kokoa izany ary mamporisika anao aho hanao an'izany amin'ny foana. vavony.
Valiny tamin'i Catwoman356
sarita dia hoy izy:
Novakiako daholo ny hevitra ary azoko tsara daholo ireo olona ireo satria kely ny toe-javatra nisy ahy ... hazavaiko ... 1,59 sy 6 volana aho nilanja 58 kg fa tsy matavy fa tena tia tena -ny fahatsiarovan-tena momba ny vatako satria fohy aho ary nanana tongotra miketriketrika ambonin'ilay tranga dia fisaka foana ny kiboko nefa manana valahana aho ... Hiezaka hanampy anao aho amin'ny filazako aminao fa tsy ho very kilao ianao ny tavy ao anatin'ny iray andro dia tsy azo atao raha tsy mihinana koa ity sakafo ity. Mahasalama ve izany ... afaka mihena ve ianao nefa tsy mandeha amin'ny rano be loatra? TSY MAINTSY manontany tena ... Mihinam-bidy aho ... manana cola ho an'ny sakafo maraina na ranom-boankazo na kafe dia tsy maninona ny toast miaraka amin'ny voatabia sy menaka ity sakafo ity dia tena zava-dehibe ary ao amin'ny k more ay k hihinana ... ny atoandro maraina tokony ho 12 eo ho eo raha manana ambre ianao dia voankazo iray ... ny mihinana sakafo an-trano ,,, tsy ilaina ny mivonto amin'ny legioma ... tsindrin-tsakafo azonao atao voankazo ,, ho an'ny sakafom-bolo eo ho eo amin'ny 5o6 ho sanwihc iray ihany fa ny jolin'ireo vorontsiloza kosa tsy voatsoaka an'ny salchicon na dulzaco ... ianao afaka mihinana ay koa ogurt voankazo ara-dalàna ,,, ary ho an'ny sakafo hariva dia tsy misy tsara kokoa salady miaraka amin'ny zavatra maivana ohatra ny trondro legioma sasany ... amin'ny sakafo hariva no kely indrindra ary mihinana aho fa tsy midika hoe sakafo be fa ny habetsaky ny lanja mavitrika ... ary amin'ny alina rehefa matory ianao, dia tsy te hanao toy izany, mandritra ny andro sisa, dia mandany vola bebe kokoa amin'ny vatana izany ary sarotra mihetsika ... ... ... ampidiro amin'ny ... bisikileta miisa 3 isan-kerinandro mandritra ny adiny iray (ny bisikileta manintsy ny tongony sy ny kibony ankoatry ny fanatsarana ny fihetsika) amin'ny hafainganam-pandeha nefa tsy tapaka amin'ny fotoana voalohany mety handratra ny taolan'ny boriky , aza manahy raha manohy mandray azy ianao ary vetivety k dia tsy haratra intsony ... ary mba hamaranana dia manoro hevitra anao aho mba hividy lanja 1 hanombohana ary aorian'ny 3 kg sy tsihy hanatanterahana fampihetseham-batana dia atoro anao ny milina fanaovan-gazety miaraka amina squats, adominals (rehefa asianao famaky izy ireo dia aza sintomina tànana ny hatokao, andramo hatrany ny mijery ny valindrihana mba tsy handratra anao eo amin'ny tendanao) sy ny bus fiara hafa fanazaran-tena k tongotra tongotra, kibo izay k kerais mampihena axer isaky ny fanatanjahan-tena in-20 tsy agais tranga ny inona no napetrany .... tadiavo ny fanazaran-tena 12 ary ataovy isan'andro k mba tsy handeha handray ny bisikileta ... ( farafahakeliny in-3 isan-kerinandro ireto fa aleo isan'andro fa tsy ballais amin'ilay bisikileta) amiko dia niasa izy io, tsy nihena fotsiny, fa raha tsy izany, dia manintona ny vatanao izany ary very ny volanao…. aza variana amin'ny very mavesatra haingana ny zavatra lazaiko aminao, ho hitanao ny valiny ... azoko antoka fa rehefa mijery fitaratra ianao dia tsy hitomany intsony ...
Mamaly an'i sarita
Manantena aho fa afaka manao izany, miaraka amin'izany sakafo m kgo d hanoanana izany
tovovavy misakafo dia hoy izy:
Ry tovovavy, mandeha ity sakafo ity, azavaiko aminao, omaly, fa hitako ity pejy ity ary nanapa-kevitra ny hanao sakafo aho, ny maraina dia misotro rano miaraka amin'ny voasarimakirana, hihinana dite maitso sy rano atoandro atoandro ary rano amin'ny voasarimakirana amin'ny alina. Niasa ho ahy izy io, satria nilanja 60kg aho ary nilanja 58kg izao, hataoko farafahakeliny 1 andro isan-kerinandro io sakafo io, satria mandeha tsara io, ny zavatra ratsy dia hoe noana kely ianao amin'ny voalohany
Holazaiko aminao ihany ny fomba fandehan'ny sakafo
MBA MANORATRA MBA HAHITA NY FOMBA AZY AMINAO SA NY FANONTANIANAO AHOANA IZAO
Mamaly ny zazavavy misakafo
Milanja 49kg aho ary te hihena mandritra ny iray andro ary miseho izany, indrindra fa ny vavony dia mahatsiaro maivana kokoa amin'ny vatana iray manontolo aho noho ny iray andro?
yadira dia hoy izy:
ENY, MIASA ITY! Matotra tokoa, tsara amin'ny sakafo hariva dia tsy mihinana na inona na inona intsony aho raha ny marina fa misakafo indroa isan'andro fotsiny aho, amin'ny 9 maraina dia mihinana voankazo sy misotro rano be dia be, rehefa mody avy mianatra dia mbola misotro rano be dia be ary mihinana voankazo indray. nefa koa legioma nandrahoina, isan'andro dia misotro rano 3 litatra aho (tsy misintona satria tsy mandeha izy dia ataoko miadana fa misotro 3 litatra.) ary manao fanazaran-tena maharitra ora iray ... Mandihy aho, mihazakazaka , mitsambikina ary manaova sit-up, ataovy izany fa efa very 3.2kg aho tao anatin'ny 3 andro! oroka ho an'ny ñ_ñ rehetra
PS: afaka 10 andro dia holazaiko aminao ny fivoarako ñ_ñ Manantena aho fa efa very 10 kilao (:
Valio amin'i Yadira
ary tsy misakafo atoandro ve ianao? oO
Salama Veronica, mazava ho azy fa tena misakafo antoandro aho, fa ny tsara indrindra ataoko dia ny TSY MAMBA
Amin'izao andro izao izay nohaniko dia ity
Sakafo maraina 1: serealy, voankazo, yaorta, dadany misy fromazy.
Sakafo maraina 2: Quesadillas misy fromazy, voankazo, voasarimakirana na ranom-boasary.
Sakafo atoandro: voankazo (paoma, melon ary pastèque)
Sakafo: salady misy kôkômbra, salady, epinara, karaoty, na ampangotrahina na manta fa otrikaina.
TSY MISY CENO intsony !!
Andro iray dia misotro litatra telo manomboka amin'ny 8 maraina aho rehefa mifoha hatramin'ny 10 alina rehefa matory
Isan'andro REHETRA! Manao fanatanjahan-tena maharitra ora iray aho, milalao mozika ary mampihetsika ny vatako iray manontolo, mitsambikina aho, mihazakazaka (latsaky ny 2 kilometatra), manao sit-up sy squats aho, miakatra sy midina amin'ny tohatra misy ny tranoko.
Tao anatin'izay tapa-bolana izay dia efa very 12.5kg aho ary faly! NY hery an-tsitrapo fotsiny no ilaina
Mazava ho azy fa manao izay lazain'ity sakafo ity aho, saingy mandra-pahatongan'ny folak'andro tolakandro, dia izao no lazaina.
Fifadian-kanina: rano mafana 1 vera sy ranom-boasarimakirana voajanahary 1 vera: Sakafo maraina: fangaro 1 safidinao ary plum 1. Sakafo maraina: Sakafo lasopy legioma 1 ary grapefue na voasary 1. / NA APPLE) Oroka tsara tarehy !!
14 taona aho, 1.60 aho ary 101 ny lanjako ary te ho very 40 kilao aho amin'ny volana Jona. Mihevitra ve ianao fa afaka manampy ahy io sakafo io ????
ny paoma dia hoy izy:
Eny, hanompo anao izy ireo, milanja 85 aho ary anio dia hanomboka besssooo aho
PS: Manolo-kevitra aho
Dinapom dia hoy izy:
Salama, miady mafy aho ny hampihena ny lanjako. Hiezaka hanandrana ity sakafo arosoko ity aho… fa ry zazakely, ahoana no hialana amin'ny fahatsapana ho noana ?? Ho ahy izany no sarotra indrindra satria mahatsiaro noana aho ary lasa ratsy toetra ary marary ny lohako. Mihetsiketsika io…. Tsy hitako izay hatao ,,, azonao atao ve ny milaza amiko hoe tsy mahatsiaro noana na maniry ianao mihinana ??? Misaotra anao
Mamaly an'i Dinapom
Natalie dia hoy izy:
ary raha misotro rano madio sy jelly ianao dia mieritreritra fa mandeha
Valiny tamin'i Nathali
Zava-dehibe 😮 Te hihena haingana koa aho 🙁
Mamaly an'i mariangel
hazo voasarimakirana! dia hoy izy:
Ny maimbo anao ary ny manjo anao dia ny manatrika milamina isan'andro mihinana ganxitos, ara-dalàna raha matavy ianao mitady hazakazaka ary manome sitraka amin'ny zanak'olombelona, ​​ary avelao irery ny voasarimakirana. handeha handresy ho an'ny voasarimakirana ary hohanina ny voasarimakirana
Valio i limoneraas!
morgana dia hoy izy:
Mahaliana ity sakafo ity, ary araka ny efa novakiako ireo hevitra izay nanao izany dia very lanja be izy ireo tao anatin'ny fotoana fohy. Miombon-kevitra amin'ny hydration sy fanatanjahan-tena aho, heveriko fa raha mihena ianao dia mila misotro ranon-javatra be dia be ary manalefaka ny hozatra.
Hataoko ity sakafo ity ho fanamby hahitana firy kilao azoko very. Mila mamoy kilao 6 aho mba ho tonga lafatra, ka manomboka aho milaza aminao hoe nanao ahoana tao anatin'ny 2 herinandro.
Mamaly an'i Morgana
Ceciliarh7 dia hoy izy:
Hiezaka ny fomban'ny Yadira aho, holazaiko aminao amin'ny herinandro ...
Valio amin'i Ceciliarh7
Dietitian dia hoy izy:
Eny, izaho dia mpihinana sakafo ara-tsakafo sy mpahay sakafo ara-pahasalamana ... ny hany zavatra ataon'ireo sakafo ireo dia rehefa manomboka misakafo ara-dalàna ianao dia mihombo ny lanjanao, toy ny hoe mihinana sakafo roa isan'andro ianao dia tsy mahazo sakafo ampy ny vatana . Ny zavatra ataony dia ny fitsitsiana tahiry ary tsy handoro tavy na kaloria…. Tsy haiko ny fomba anaovanao zavatra adaladala toa izany, raha te hihena ianao, sakafo voalanjalanja misy sakafo 5 isan'andro, ary be dia be. fanatanjahantena.
Valiny ho an'ny Dietitian
Alexandrinus dia hoy izy:
Salama fa ny anarako dia ALEJANDRINA…. IZAO koa dia manana olana momba ny fiambenana mandrapahafatiny ary namono KILOS 5 aho ary nijanona aho. NAHOANA IZANY ... HENO FA NY fihinan'ny ASTERISKA ... ARY FANONTANIANA hafa. KALORIA MARO NO TSY MAINTSY MBOLA HAHAFINARITRA NY VOLA ...
Valiny amin'i ALEJANDRINA
yendri dia hoy izy:
Te hihena aho dia manandrana fa tsy afaka manampy ahy azafady
Valio i yendri
Alexiis_jaki dia hoy izy:
Hey, te ho very kilao vitsivitsy aho ... fa ahoana no hataoko mba tsy ho noana intsony aho?
Valiny tamin'i Alexiis_jaki
Dpk_stf dia hoy izy:
Valio amin'i Dpk_stf
casianeles_xd dia hoy izy:
misy olona manangona sakafo ahoana no hahavery 5 kilao?
Valio amin'i casiangeles_xd
Manao fanazaran-tena isan'andro aho ary mihinana voankazo sy legioma ary tsy misy cookies na vatomamy na hena, izany fotsiny ary 7 andro fotsiny aho ary very 7 pounds, izany hoe iray kilao isan'andro. Ny tendrony iray dia aza lanjaina amin'ny kilao raha tsy amin'ny kilao dia ianao no fandrosoana haingana indrindra amin'ny kilao satria manentana bebe kokoa ny tenanao ianao satria sarotra ny hahavery iray kilao noho ny iray kilao (adala) Manantena aho fa ny torohevitro dia hanompo anao. Tsara vintana! !
Mamaly an'i nelly
Daughterdemorpheus dia hoy izy:
Ny fisakafoanana dia tsy maintsy atao manokana satria samy manana ny fepetra takian'izy rehetra… Jereo ny matihanina.
Mamaly an'i Hijademorfeo
Salama, very 7 kilao aho izay very 1k s isan-kerinandro.
misotroa rano betsaka
lizbeth dia hoy izy:
Milanja 53 kilao aho te hampihena ny laniko ary mihinana ny sakafo foana aho, ary tsy tiako koa ny silaka aniko haha
Mamaly an'i lizbeth
Te hihena aho fa tsy mihinana n'inona n'inona
Aurora ..... / = dia hoy izy:
Te ho mahia toa ahy aho mba tsy ho mosarena ...
ampio aho ???
Valiny tamin'i Aurora ..... / =
WTF dia hoy izy:
Milanja 64 aho nefa ato amin'ny vatako dia matavy loatra aho: ankoatry ny fampihetseham-batana omen'izy ireo ahy hanala ireo silaka ary hidina kely kokoa
Valiny amin'ny WTF
Iri_love_teamo dia hoy izy:
Te hihena aho tena tsy faly .. Ayudaaaaaaaa!
Mamaly an'i Iri_love_teamo
Maricielo_06_11 dia hoy izy:
Te hihena haingana aho
Valio amin'i Maricielo_06_11
Erick_elnaughty dia hoy izy:
misotroa rano miaraka amin'ny voasarimakirana
Mamaly an'i Erick_eltravieso
Te handany lanja haingana aho fa tsy misy manisa
Mamaly an'i jesie
Katylinda_1994 dia hoy izy:
Salama, milanja 56 kl aho te ho very 5 kl fa tsy haiko hoe ahoana no tena noana be, ampio aho
Valiny tamin'i Katylinda_1994
Ahoana no hamoizako 15 kilao ao anatin'ny 25 andro mba valio
salama te hahafantatra aho raha afaka mihinana zavatra hafa amin'ny sakafo maraina fa tsy "plum".
Te hihinana sakafo aho satria matavy be ary marary ny tratra :(
Frankie_Muu dia hoy izy:
Salama Weight 48 Izaho 1.53 Kiero Mialà fa matavy loatra aho mahatsapa tena toy ny voamaina Ampio aho azafady
Valio i Frankie_Muu
Jan14 dia hoy izy:
Mbola tanora tokoa aho, 156cm ny halavako ary milanja 60,7 kg. Fantatro fa tsy dia matavy loatra aho, fa te hampihena ny lanjako ho 55 kg na 50 kg ao anatin'ny herinandro. Raha tsy izany manify ny valahany manodidina ny 10-20 cm
Valiny amin'ny Eneri14
mahareta ... raha manana fotoana be dia be amin'izany lanja sy refy izany ianao, ataovy milamina ny fizotrany ... sakafo sy fanatanjahan-tena ... tsy misy tsy hanoanana anao ... ary faharetana be ...
15 taona aho, mandrefy 1.64 ary milanja 61.7kg ary ny nofinofiko dia ny 50 kg ary mitazona ny tenako satria, toa ahy ihany, mihena aho ary indray mandeha dia very 3kg aho tao anatin'ny 15 herinandro fa avy eo dia niakatra aho ary tsy fantatra izay hatao
Juliidiivii dia hoy izy:
Ny marina dia diso aho 17 taona aho, 105 kilao ny lanjako ary 1.65 cm no refiko
Valiny tamin'i Juliidiivii
47 taona aho, nilanja 128 kilao .. Mitovy refy amiko ny refiko… very kilao 3 isam-bolana aho, milamina tsara. Nanome ahy sakafo manokana ho an'ny olona manana olana amin'ny glucose ny mpamatsy sakafo ahy. Mitandrema, raha atambatra ny sakafom-pamoronana AAN'ORANA PROFESIONAL ho anao, ary manao fanatanjahan-tena ianao, dia handeha izany. raha tsy izany dia hiadana kokoa ianao ary ho kivy ianao ... tsy tiako ho lasa iray hafa ianao ho an'ny statistika mahazaka diabeta na insuline., ... fantaro ny momba ny acanthosis nigricans ... mety manana fanoherana insuline ianao ary manao izany ianao tsy fantatra…. Maniry ny tsy hisy an'ity aretina ity aho ...
Alba12-1999 dia hoy izy:
Tsara raha afaka mamoy ireo kilao fanampiny izay tsy eo aorian'ny famoizana io kilao io tao anatin'ny iray andro
Valiny tamin'ny Alba12-1999
Lorekiut1 dia hoy izy:
ary mba tsy hanoanana anao dia mihinana voankazo misy kaloria ambany ianao fa tsy mihinana paoma na akondro, satria manana voankazo mamy be ireo voankazo ireo
Valiny tamin'i Lorekiut1
Raha garda ianao dia tsara kokoa ny maka capillo ary ataovy ao am-bavanao izay manampy sy bomita lo170 ary milanja 45 ity perfecya ity dia mijanona hahatratra 30 aho ary very vintana 15 kilao nefa hoy izy ireo fa marary aho fa Tsy mino an'izany aho rehefa mankany amin'ny dokotera dia lazain'izy ireo fa isaky ny oroka tsirairay avy fa lainga izany
Mba tsy ho noana ianao dia alao sary an-tsaina hoe andriambavy manana satro-boninahitra sandoka ianao ary mihinana bebe kokoa ianao mandro manimba ny sakafo no voankazo voarara ary mpamosavy ny olona manolotra sakafo ho anao
Samantha Chestnut Hole dia hoy izy:
Salama, tanora aho fa 1.56cm ny halavako ary milanja 56kg aho. Fantatro fa matavy aho satria ny renibeko milanja kely noho izaho ary tsy tiako izany, hataoko ity ary ho hitako raha mampihena lanja
Valiny tamin'i Samantha Castaño Hoyos
Mila mahafantatra ny fomba hampihenana lanja aho satria tampon'isa sy tampon'isa be indrindra?
Ampio aho azafady !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
My-Cami dia hoy izy:
Salama, tanora tokoa aho amin'ity 1,57 ity ary 55,2 KG, 11 taona aho ary matavy, te-hahatratra ny 39 na 0 kg, mety mahia aho nefa mahia.
Mamaly an'i Mi-Cami
Lili dia hoy izy:
nandritra ny andro firy taorian'izay dia afaka nanao ny sakafo aho
Salama, ahoana no hampihena ny lanjako haingana? Nanandrana sakafo sakafo aho. Fa manao azy mandritra ny iray volana aho ary avelako ary manomboka misakafo sy mihinana milanja 54 aho ary 1.53 fantatro fa tsy dia matavy loatra aho fa talohan'ny nandanja 40 izay tena sarotra tamiko satria hatrizay mahia aho taloha aho dia tsy. Tena fohy ihany koa aho amin'ny lanjako ary matavy loatra aho. Azafady mba ampio aho, tsy haiko ny mampihena lanja nefa tsy noana isaky ny mandeha fitaratra aho, ketraka dia manomboka mitomany hoy ny ray aman-dreniko hoe tsy matavy aho fa fantatro fa raha izaho dia toy ny trozona.
Hana dia hoy izy:
Salama– Te-hahafantatra ny fomba hisorohana ny fitsaboana aho –– satria mahatonga ahy hihinana bebe kokoa ireo!
Mamaly an'i hana
cosumba dia hoy izy:
Ny famoizana lanja ka maivana dia tena ratsy, satria mora azo indray ireo kilao ireo .. tsara ny manary 2 kilao isan-kerinandro nefa tsy mosarena
Mamaly an'i cosumba
Mirefy 1,65 aho ary milanja 50 ny vatako dia somary hafahafa satria manana horonana be dia be tsy fantatro akory hoe avy aiza izy ireo ary efa nanandrana nihinana aho fa tsy mahafehy tena toa ny REHETRA! Tsy mijanona aho fa noana foana! ary eo an-tampony dia handeha hanao vakansy aho ny volana janoary faharoa ary te-ho mahia na inona na inona mila mahia mahia dia mihinana voankazo betsaka nefa afaka mihinana paoma 3 amin'ny iray ka tsy hitako izay hatao. Te ho mahia aho dia ny lanjako mety indrindra dia 40 kilao mila very 10 kilao aho ka hanao izay ezaka rehetra ataoko mba tsy hihinana heveriko fa hanjaitra ny vavako ary hisotro rano fotsiny aho HAHAHAHA ah manao fanazaran-tena hoy aho ah
Ny lanjan'ny idealy farany ambany indrindra amin'ny haavon'ny / haavo 1,65 dia 53 - 56 kg.
Miaraka amin'ny 50 kg dia efa ambany lanja ianao.
tita dia hoy izy:
Heveriko fa kool ity sakafo ity, hataoko fampiharana ……………… .ary avy eo holazaiko anao ny fahasalamako …………… ..chao
Mamaly an'i tita
12 taona aho fa matavy loatra, tsy navelan'ny reniko hanao sakafo manokana aho ary tsy mahazo mihinana izay ataoko, mihinana kely aho, tsy mihinana ????
Andramako izany, raha manampy ahy izany dia ampahafantaro ahy (;
Mamaly an'i Chiari
Genesiis Sanguiinettii dia hoy izy:
Tiako ity sakafo ity ary nanomboka nisotro rano aho, izay no zava-dehibe 😀 Maniry mafy ny hahavery 1kl ao anatin'ny 1 andro fotsiny aho !! Hanaraka an'io sakafo io isan'andro aho satria tiako io!
Valiny tamin'i Genesiis Sanguiinettii
damaris dia hoy izy:
Ahoana ... no hampidinako azy ireo hihinana zava-mamy mihoatra ny gilasy rehetra izay fepetra tiako hovidiana ???
Mamaly an'i damaris
Azonao atao ve ny mametraka zavatra anaty ronono an-tsokosoko satria maharikoriko ahy fotsiny izany, na soloina doka misy tsiro karazana ronono soja?
Heveriko fa tsara izay rehetra ao anatin'ilay lalao volomboasary, ho raisiko ka hanomboka handray azy amin'ny maraina
Mamaly an'i tomy
Mamaly an'i Viki
valery dia hoy izy:
Ity horonantsary ity dia mahalala fofona fa misy mahita an'io ary lasa tsy mihontsina ary natao ho an'ny ratsy indrindra ny fahasalaman'ny tsirairay ireo nametraka ity horonantsary ity
Valiny amin'ny valery
Salama, vehivavy aho, 16 taona aho ary milanja 80 kilao. Ny hany tadiaviko dia ny mampihena lanja. Mihevitra ve ianao fa hanampy ahy ity sakafo ity? Talohan'ny nahitako hoditra nefa matavy aho satria latsaka anaty fahaketrahana. Inona no hatoro anao: /? azafady mitady mafy iray aho, misaotra (:
Pazuzu dia hoy izy:
Liana aho hanaraka an'ity sakafo ity, saingy tsy fantatro hoe inona ny safidin'ny safidy
Valiny tamin'i Pazuzu
Vale Rodriguez Tapia dia hoy izy:
Salama, nilanja 54 aho izao, milanja 49 ary 1,61 aho, ahoana no fahitako hoe salama aho, omal x Fa, lazao ahy fotsiny hoe fa maninona aho, mahatsiaro matavy be aho nefa mihinana sakafo
Valio i VaLe Rodriguez Tapia
am-pamoloanao dia hoy izy:
Tsara izany saingy tsy azo atao ny manao izany rehetra izany ao anatin'ny iray andro amiko fa hiezaka aho toa sarotra kely nefa azoko antoka fa hahatratra azy aho
Mamaly an'i ambar
Ahoana no hakana azy ireo fa tsy matoky ahy loatra aho satria lazain'izy ireo fa lainga ny famolavolana amin'ny Internet, hovonoin'ny reniko aho raha fantany fa manaraka ny dingana avy amin'ny pejin-tranonkala aho, ny reniko dia tsy tia ahy mamorona. zavatra amin'ny internet, ny rahavaviko na koa saingy heveriko fa mety hahasoa ahy io, tsy zakako intsony ny vavoniko, milanja efa ho 37 kilao aho, tsy mampiasa an'ireny sakafo ireny aho ary tsara kokoa ny refesina ny tenako
fa tsy maintsy tondroin'izy ireo amiko ny razana fa rehefa tsy mijanona aho dia toa serda tsy haiko ny manalavitra azy ary avy eo mihinana ny sakafoko izay navelan'ny reniko ho ahy ny sakafom-poko fa tsy mihinana aho ary tonga ny sakafo hariva dia manompo zavatra matsiro be dia be fa tsy tantiko ny mahita azy torohevitra omena ahy ???
Yusra Kisses dia hoy izy:
raha mandeha io dia very kiloooo aho
Valiny tamin'i Yusra Kisses
inona no super tist
15 taona aho, 1.69 ny halavako ary milanja 49 kilao aho, saingy te hampidina ny valahako, izay malalaka be ary ny tavako koa hanao azy ary hisokatra raha toa ka mety izany.
Salama, te-hanao an'ity sakafo ity aho ho an'ny diapeno Fantatro ny antony anomezanao anay sakafo 8, azonao atao ve ny miteny amiko amin'ny fork fa tsy maintsy raisiko tsirairay?
Mitandrema amin'ny vokatr'izany
Vao 10 taona aho ary 33 taona ny lanjako ary manana ny zanako lahy kely aho ary te handany 1 kilao. Mety ve io sakafo io? 1 kilao fotsiny no very, saika mahia daholo ny namako ary tsy te ho mahia toa ny namako fotsiny aho, ka afaka manao sakafo ve aho? , ary mieritreritra ve ianao fa ho very 2 kilao aho ao anatin'ny iray andro?
demiselena dia hoy izy:
Salama, 16 taona aho ary milanja 51 nefa manana kibo (horonana) ary te handany 3 kilao. Inona no tsy maintsy ataoko?
Mamaly an'i demiselena
Cande dia hoy izy:
Salama, Candela no anarako ary 11 taona aho, lanja: 55 ary te hidina amin'ny 49 aho, izay afaka manampy ahy azafady!
Valiny amin'i Cande
Salama! 12 taona aho, milanja 53kg ary 1.64cm ny halavako.
Salama! 14 taona aho ary manana horonan-taratasy roa ary te-hialana amin'izy ireo dia manana potipotika 2 tsara kokoa aho ary manify izy ireo ary tsara aho miaraka amin'ireo horonan-kevitro ary tsy mahatsiaro ho tsara velively aho te-hampihena na hanafoana ireo horonana ireo mieritreritra fa mandeha ity sakafo ity
Ry zazavavy, tsara ny sakafo. Raha tsy sitraka dia mahia isika. Mijanona matanjaka fotsiny. Rehefa miahiahy momba ny sakafo ianao, na dia tsy noana aza, misotroa rano. Izany no antony nilazan'izy ireo fa ambany indrindra ny rano roa litatra. ENY AZONAO, MAHASOA.
amaraine dia hoy izy:
Ry zazavavy raha tianao dia afaka manome vaovao anao momba ny fomba hampihenana lanja aho nefa tsy mamelona anao ary mamelona anao, very 12 kg manokana aho tao anatin'ny iray volana, avelako ny tatitra whatsapp ato +522297798481
Maider Echevarria dia hoy izy:
Salama, 14 taona aho, mandrefy 1,50 sy lanjako 49,5 kilao, matavy be aho ary amin'ny 5 Jona dia manana kaonseritra lehibe indrindra amin'ny fiainako aho, hihaona amin'ireo sampy Gemeliers sampiko fanindroany aho, ary amin'ny kaonseritra no mandeha tovovavy ary heveriko ho tsara tarehy aho, ny hany tsiniko tsy mahomby dia ny vavoniko, azafady mba ampio
Valiny tamin'i Maider Echevarria
Tsy maintsy manomboka amin'ny fototra aho. Samy hafa ny vatana tsirairay, izany hoe mila sakafo isan-karazany ny tsirairay, mandoro kaloria amin'ny fomba hafa ary lava lava lava sns. Nandao an'ity aho dia mpihinana sakafo sy endocrine ankoatry ny mahandro mahandro. Ity sakafo eto ity dia mandeha fa ny zava-dehibe indrindra dia ny tsy mampihena ny lanja fa satria very lanja tsara ianao. Ity fihinanana sakafo ity dia mazàna mampihena ny lanjany satria ao anatin'ny iray andro dia hihinana hypocalorika ianao izay latsaky ny 1000 kcal ao anatin'ny iray andro ary eo an-tampony dia hihinana sakafo manala metabolika ny tavy sy ranon-javatra ianao nefa nilaza tsara tamin'ity sakafo ity fa ho very 2 kg na 3 fa ireo 100 gr na latsaky ireo ihany no ho matavy ary ity no heveriko fa ny olona rehetra namaky teto dia liana very fa tadidio fa amin'ny fandoroana 1000 kcal isan'andro hanampiana ny metabolisme basal anao dia mila herinandro 1 ianao ho very tavy iray kg. Ka izany no antony tsy tokony hanitarana an'io sakafo io alohan'ny hanaovany azy indray ary izao dia hijinja raha tsy latsaky ny 16 taona ianao dia aza matoky ny sakafo an-tserasera ary tsy hoe satria tsy mandeha izy ireo fa ny zaza sy ny zatovo dia eo am-pivoarana. tena sarotra amin'ny vatana izany ka mila mivelatra i kcal, izay anoroako koa raha toa ianao ka antonony izao dia manao fanazaran-tena 30 m isan'andro ary manova kely ny fahazarana mihinana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny sakafo nendasina, hamburger ary alika ... amin'ny sakafo junk amin'ny ankapobeny ary hihena kely ianao nefa mahomby sy azo antoka. MIFALIA!!
1 - rano antsasaky ny kaopy, ampio ny isam-bary isaky ny kilao tianao ho very lanja.
2- aza asiana vary varimbazaha betsaka noho izay ilaina satria tsy tafarina mihitsy ireo kilao ireo.
3- Amin'ny alina, sotroy ny rano, avelao ny voam-bary ary averina fenoy ilay kaopy.
Ny maraina (Alakamisy)
1- Ny maraina amin'ny vavony foana dia sotroina ny rano rehetra mamela ny voam-bary ary avy eo fenoy rano indray ilay kaopy, roa.
Ny maraina (zoma)
1- Sotroina ny rano rehetra, ao anatin'izany ny voam-bary.
1- Tazomy ny kaopy mandritra ny fizotrany.
2- Mizara kopia (photocopie) amin'ireo olona fantatrao fa te hihena, kopia arakaraka ny kilao tianao ho very (1 kopia x kilo)
3- Atombohy amin'ny Alarobia ny sakafo fa tsy alohan'ny fizarana ireo kopia.
4- Azonao zaraina amin'ny olona manodidina anao ny sakafo.
5- Aza misakafo
cony dia hoy izy:
Salama, tiako ho fantatra raha azoko soloina ranom-boankazo 2 litatra (velona na livean) ny rano izay manana siramamy 20 litatra litatra 0%, misaotra
Mamaly an'i cony
havana dia hoy izy:
Salama namana te-hamaly ny sasany amin'ny valinteninao aho (tsy mpamokatra an'ity bilaogy ity aho). Ity sakafo ity dia natokana ho an'ireo olona te hihena haingana ary tokony harahina mandritra ny iray andro, mamporisika anao raha te hihena ianao 10,15,20,25,30, 5 kilao afaka manampy anao aho. Manoro hevitra anao aho mba hiezaka ny handany lanja tsikelikely satria raha tsy izany dia mety hisy vokany eo amin'ny hoditra ny dian-kapoka. Fa raha fitsingerenan'ny andro nahaterahanao ary te ho tsara tarehy ianao (na dia efa ananao aza) dia mamporisika anao hanao io sakafo io dia azonao atao ny manaraka ny sakafo mandritra ny telo andro izay hita ao amin'ny Google. Avy eo ianao dia afaka manaraka sakafo hanary 11 kilao ao anatin'ny herinandro ary miverina ary manao ny fanazaran-tena raha mbola te hanana kilao bebe kokoa ianao dia manisa fa ao anatin'ny 11 andro dia ho very 11 kilao bebe kokoa na latsaka ny fomba hanarahana an'ity sakafo ity 10 andro ao misesy fa mahasalama kokoa ary raha te ho very 300 kilao isan-kerinandro ianao dia mamporisika anao hanangana ny sakafo maraina misy 400 kcal, ny sakafo atoandro sy ny sakafo hariva ho an'ny 150 kcal, ny sakafon'ny 150 kcal ary ny sakafon'ny 4 kcal. Amin'izany dia manome toky anao aho fa afaka misintona izay rehetra tadiavinao ianao fa tsy maintsy miandry XNUMX andro vao miverina ary manao izany. Ary raha noana ianao dia afaka mividy ao amin'ny fivarotam-panafody valopy sasany izay ampiasaina hifehezana ny fitaintainan'ny fihinana ary koa mividiana vokatra hifehezana ny fisehon'ny marika mihinjitra. Manantena fa manampy izy ity.
Mamaly an'i nis
ruthsite dia hoy izy:
Ny fahaverezan'ny lanja dia olana ara-pahasalamana, tsy dia amin'ny fomba hatsarana loatra, raha ny amiko dia nahazo lanja be aho satria nanokan-tena ho an'ny sakafo haingana sy ivelan'ny ora tokony hiasana, ankoatry ny fihinanana soda na ranom-boankazo be loatra, ary tsara Araka ny efa nampoizina dia nitombo lanja aho izao, matavy loatra aho, 164 cm ny refiko, ary milanja 73 kg aho izao, fantatro fa tsy maintsy mamoy farafahakeliny 60 kg aho mba hanana fiainana salama, tsy te ho mahia mahia. Raha tsy izany dia marary ny lamosiko ary mikorontan-tsaina amin'ity lanja ity aho, tsy lazaina intsony fa miaina fiainana mipetrapetraka ao amin'ny birao aho, ary nanomboka nihinana voankazo, ary nanondraka rano 2 ka hatramin'ny 2 litatra ary 1/2, fa tiako fantaro izay sakafo tokony hohaniko bebe kokoa. Ny sakafo dia sarotra amiko ny manaraka azy satria maratra lamosina aho, ary noho ny lanjako, ny fihazakazahana dia mampitroatra ahy ary mahatsiaro ho reraky ny havizanana aho, ka nanapa-kevitra ny ho sitrana aho satria mbola tanora koa.
Mamaly an'i ruthsita
(1) Ny fialan-tsinin'ny lamosinao na hampihetsiketsika ny tenanao dia tsy hahavonjy anao tsy hanao fanatanjahan-tena, ary mahatsiaro reraka ianao satria tsy manao zavatra INDRINDRA, izany hoe, raha tsy mitsahatra manao na inona na inona ianao dia tsy hitsahatra ho reraka ... any dia ny «fiofanana ifotony»… google io na ahita izany ao amin'ny youtube, tsy mihozongozona izy, tsy mila famerimberenana, ary noho izany dia tsy misy fiantraikany amin'ny ratra izany.
(2) Ny fiainana salama dia tsy rehefa milanja 60kg ianao, ny fiainana salama dia misakafo tsara sy mahasalama, mandalina ny zavatra tsara sy ratsy ary manao hetsika ara-batana.
(3) Raha te hihena ara-pahasalamana ianao dia esory tanteraka ny siramamy, esory tanteraka ny gliosida, sotroina rano 2 litatra tsy an-kanavaka, mihinana proteinina ambany tavy, mihinana legioma maitso, eto dia manana sakafo maitso ianao (https://www.nutridieta.com/dieta-a-base-de-verduras-verdes/), mihinana voankazo mamy roa tsy mihoatra ny roa isan'andro, makà lasopy legioma, atsofoka amin'ny zava-mamy (aleony "stevia" satria tsy artifisialy izy io, avy amin'ny zavamaniry voajanahary) ary tsy misotro alikaola na setroka.
(4) Mora ary tsy siansa ny fahalalana ireo zavatra ireo ary miaina fiainana salama, ny sarotra dia ny manolo-tena hanao izany ianao ary tsy ho lasa mpanjakavavy fialan-tsiny….
aretina tsy azo sitranina dia hoy izy:
Salama, te hahalala aho raha niasa tamin'olona iray ary tena namoy fo aho, manohy sakafo tsara nefa tsy maintsy very ireo kilao fanampiny, afaka manome toky ahy ve ny olona fa mety ho very amin'ity sakafo ity aho?
Valio ny kivy
Salama, lehilahy 40 taona aho ary manana krizy 40 dia nihena aho satria refesina 170cm ary milanja 92kg ary tao anatin'ny 3 volana dia very 15kg aho ary hanazava ny fomba:
Sakafo maraina: ronono skim misy kakao kely sy voamadinika katsaka antsasaky ny vera.
Sakafo atoandro: voankazo, paoma tsy mitongilana matetika.
Sakafo: ny zava-drehetra, fa lovia kely tsy misy sira ary mofo kely dia kely no voa.
Snack: mofo katsaka 4 sy ranom-boankazo voajanahary
Sakafo hariva: yaourt skim fotsiny
Ary ambonin'izany rehetra izany, mandehana 6km isan'andro.
Nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma io, ny faran'ny herinandro ara-dalàna tsy misy fimamoana na alikaola na paraky.
Famaranana: 16kg latsaka ary milaza amiko ny rehetra fa lehibe aho ary mahazo tombony be amin'ny fahasalamana sy ny fahatokisan-tena ianao.
Eny, antenaiko fa nanompo anao ohatra izany, mila manana finiavana fotsiny ianao fa tena mendrika izany. Arahaba 🙂
Valiny tamin'i Loreno
Tadidio foana fa zava-dehibe ny tsenan'ny vokatrao, ary te hikendry izany ianao
mpihaino marina. Mandoa isaky ny hetsika, varotra isaky ny hetsika na vidin'ny vidin'ny vidin'entana. Ianao ihany
mila mitazona ny orinasanao sy ny fiainanao manokana.
Mamaly an'i Sol
tsy mahay mandanjalanja dia hoy izy:
Salama!… Ary, araka ny nolazaiko taminao, aho koa te hampihena lanja kokoa ny kiboko amin'izay reko. Misy fomba vaovao, eny, tsy vaovao ny harato fa mandeha ary 15 taona aho. Nanomboka nanao izany aho tamin'izaho 14 taona. ary ny volana sisa tavela hanatanterahana ny iray hafa. Te-hitory zavatra aho ¨ *** ity fomba ity hampihena ny lanja sy hampidinana ny kibo dia mahagaga, ¨¨ ny tokony hataon'izy ireo dia rehefa mandeha misakafo dia milamina ny fihinanany na dia tsy tian'izy ireo aza dia maka rofin-drano ary avy eo ry zareo Mandro dia toa maharikoriko anao fa raha sanatria te hihena ianao na hametraka ny rantsan-tànanao amin'ny tendanao mandrapahatonga anao manome baomba anao ary mihinana papalla be dia be amin'ny vavony foana, dia dia vokatra tsara hanaovana azy mandritra ny 6 andro isan-kerinandro
Mamaly ny tsy fahafaham-po
katherine. dia hoy izy:
15 taona aho, milanja 86kilos, 1.65m ny halavako.
Mila mampihena ny lanjako haingana aho, satria tsy ho ela ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako ... Inona no amporisihinao ahy hataoko, impiry no tokony hanaovana an'io sakafo io?
Mamaly an'i katherine.
MARIA PAULA dia hoy izy:
I HOLA VAELTINA dia TAGODA ARY TSY AZoko RENADA MIHINTSIKA KIOL miaraka amin'i MARIA PAULA KA TSY MISY ENY AZA ATAO TSY FAMPISEHOANA NY LOHATEN'NY FAHAMARINANA LALANA NICOLAS SY NY JUICE TSY MISY HANANAO HATRANY COCONUT SY JUICE VAELTINA RAHA HITADY IANAO COCONUT SY JUICE VAELTINA TAGODA TSY MAMPIASA IZAO FA TSY MISY FIAINANA VAELTINA TSY MBA TSARA RAHA RY NAMANA KATERINA ENY NO SAHARAKO
Valio amin'i MARIA PAULA
HELLO VAELTINA SE TAGODA MIHAOTRA FOTOTRA MAHATSARA ARY ENY NA TSY MISY POISONY APPLE KIOL A COCONUT GAMERA NAMANA AN'NY KATERINA BUERA MARIA PAULA IZAO HO AN'NY CUPA DEME DEME DEME MUHO AAHHH RAHA NY FOMBA IZANY
HELLO VAELTINA GODA ARY TSY AZO RENADA MBOLA HANAVAO AZO MBA TSY MAINTSY ´MAHAY TSARA TSARA MARIA PAULA MIHAZA TSARA ARY AAHH MBOLA TSARA
HELLO MARIA PAULA ARY TSY AZO ATAO INDRINDRA NY POTATO SY NY JUICE COCONUT GASS TSARA KA TSARA NY APLISY POISONY NA TSY MANANA FIANAKAVIANA COW FAFAKA GOPARA MY CUPA LLUDME ENY MASO TSY MISY ARY KATERINE PESO ARY IZAKO FA IZAHO AZA milalao TSY MISY FA NICOLAS MIHAINA ARY MALALAKA FA TSY AMIN'NY GACOMER NA INDRINDRA
HELLO MARIA PAULA VAELTINA MAHAZO TAGODA ARY AZO ATAO RENADA COMOE NICLOAS REPEAT IZAY NITSIPOTRA NY LLUDEME KIOL1 TSY ENY NA BIRNO TSARA KA MBA AZONAO RAHA MIKASIKA APPLE POISONED ianao
HELLO MARIA PAULA VAELTINA MAHAZO TAGODA ARY MIHA POTATOES ARY AZO TSARA RENADA TSARA KA TSY MISY JU COCONUT ENY COOLONY KIOL GLASS A 2 MOMBA NY CUPA LLUDE I NAMANA
HELLO I BAMARIA PAULA VAELTINA SE TAGODA MIHA POTATOES ARY MBOLA HAHAZO ZAVATRA JUICE COCONUT COCONUT ARY TSY MANAIKA ARY ENY ENY ARY IREO MARIA PAULA IZAY HO AN'NY CUPA AZoko dia manome lanja ahy tsara ASI KIOL 2 taona
HELLO I ABA MARIA PAULA VAELTINA NO TAGODA ARY AZO ATAO RENADA HANDRESY ULLDEME FRIENDS COCO KIOL WEIGHT GLASS ARY TSY MISY RAHA MIHAINA PAPAS SIMOS TSARA JUTO VAELTINA TSY MISY ENTREO DIA ENY DIEGO ENY NY MARNE COCONUT KIOL PESO FANAHY 30 BESJ
HELLO I MARIA PAULA VASO VAELTINA TSIA ARY YNNI ENY ARY DIEGO ENY ARY I MARIA PAULA MIHAONY FA NAMANA TSARA NY CUPA ULLDEME ANAKO MUHAS BUJAS
HELLO IZAHO NO MARIA PAULA, IREO Torohevitra ireto dia mandeha
satria tsy nety tamiko
HELLO VALETINA dia TAGODA ARY AZONAO ATAORANA NY KIANA GOPARA KIOLO KA TSARA MARIA PAULA COCO HERIN'NY RANO MIHAINA ENY SA TSY MISY AZO AZY MASO HO AN'NY WAIERIN'NY SHOE VAELTINA AZA TOA TSARA IZAO KIOL 4
HELLO VALETINA NO TAGODA ARY TSY HANANJAKA IZAHO FA ENY AGOEJARESISO FUTAS COCO TSARA KA TSY MISY MARIA PAULA DIA HITAKOO EO ARY
HELLO I MARIA PAULA Fantatro fa i VAELTINA SETAGO HANASITRANA NY CUPA A LLUDEME MIHAOTRA FOTOTRA NY JUICE COCONUT KIOL A 2 ASA TSARA TSARA NY VEHIVAVY BULAS DEMO NA FUTAS ARY NY JUICE SAYUNO LEMON MITADY DETAILS
Salama, liana aho, te-hampihena ny sakafo tokony ho 30 aho, somary mavesatra ny zorony ary ny marina dia manana olana amin'ny lohalika aho raha azonao omena ahy sakafo vita amin'ny legioma sy voankazo, misaotra
Sarotra be ity lahatsoratra ity. Raha tsy mihinana sakafo ianao ary manomboka manao izany ao anatin'ny iray andro, dia mazava ho azy fa very iray kilao ianao, fa izay very anao kosa dia ranoka. Raha very iray kilao ianao dia mila mamoy kaloria 7.000-9.000 farafaharatsiny ary ny vatantsika dia mandany kaloria 1.500 sy 2.000 isan'andro, dia mila manao matematika fotsiny. Tsy azo atao mihitsy ny mamoy ireo kaloria 7.000-9.000 ilaina hamoahana kilao, izay very dia ranoka. Ary raha efa nanomboka ny sakafo ianao, dia io no zavatra very voalohany, ka tsy hitondra soa. Ny fianarana misakafo ara-pahasalamana no zava-dehibe fa tsy dia hadalana loatra amin'izany.
Ao anaty fanamby aho ary 1kg fotsiny no milaiko hahazoana azy, mila very maika aho kg, antenaiko fa mety amiko ity sakafo ity